Guddigga Madaxbannaan ee Doorashooyinka Qaranka (GMDQ) oo kulan la qaatey Duqa Muqdisho – GMDQ
Guddigga Madaxbannaan ee Doorashooyinka Qaranka (GMDQ) oo kulan la qaatey Duqa Muqdisho
Guddiga Madaxbannaan Doorashooyinka Qaranka ayaa kulan la qaatey Gudoomiyaha Gobalka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdishu Maxamed Cabdi Tabit, Taariikhdu markey aheyd 12,12,2017, kulankaas oo ujeedadiisu aheyd in xoogga lagu saaro sidii looga sameyn lahaa wadatashiyo dadweyne oo ku saabsan doorashooyinka qof iyo cod ee 2020 kaasoo guddigu go’aansaday in laga qabto gobalka Benadir. Waxay kulankooda kaga wadahadleen arrimo kale oo badan oo khuseeya doorashooyinka qof iyo cod oo la qaban doono 2020.
Gudigu wuxuu qorsheeyey in dadweynuhu qeyb ka ahaadaan lagalana tashto arrimaha doorashooyinka dalka si ay u noqoto wax dadweynahu ka yimid loona helo aragti mideysan oo ku aaddan isla qaadashada doorashada.
Guddigu wuxuu guddoomiya u sharxay hannaanka ay rabaan in ay uga hirgeliyaan wadatashiyadaas iyo qorshaha ay u dejiyeen si Gobalka qeybtooda ku aaddan ay uga qaataan taasoo ah diyarinta goobaha munaasabka ku ah iyo arimaha amniga goobta laga qaban doono.
Guddoomiyaha ayaa balanqaaday in uu la shaqeyn doono dadaalka guddiga ay ugu jiraan qabsoomidda doorashada qof iyo cod wuxuu caddeeyey in uu kala shaqeyn doono inta ay socdaan wadashiyada dadweynaha Moqdishu.
Guddiga ayaa u riyaaqay sida duqa Muqdishu u garab istaagay geedisocodka wadatashiyada gobalka Benadir
Ugu danbeyn, kulankaayaa ku soo gabagabooyey is afgarad iyo wadashaqeyn dhex marta guddiga iyo maamulka Gobalka.
Waxaa la faafiyey December 13, 2017